Somaliland: Wasiirka Maaliyadda oo Ciidanka Qaranka ku Wareejisay Gaadiid iyo 10 Kun oo Jaajuur ah - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Maaliyadda oo Ciidanka Qaranka ku Wareejisay Gaadiid iyo 10 Kun...
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Somaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan, ayaa Taliska Ciidammada Qaranka ku wareejisay Gaadiid kuwa Ciidammada ah ee loo yaqaanno TR.
Sidoo kale, Wasiirka Maaliyadda ayaa Taliska Milletariga ku wareejisay Jaajuur (laban) ka kooban 10 kun oo midh, kaasi oo loogu talo-galay in lagu dayactiro xayn-daabka Qaybta 31-aad ee Ciidammada Milletariga Jamhuuriyadda Somaliland.
Wasiirka Maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo madashii ay ku wareejisay Gaadiidka iyo Jaajuurka ka hadashay ayaa sheegtay in laga war-hayo Ciidammada kala duwan ee Qaranka, maaddaama oo ay yihiin kuwa ka masuulka ah amniga Dalka ee hadh iyo habeen ku mashquulsan Ilaalintiisa, waxayna tidhi “Nabaddaa iyo waxa Waddankeena (Horumar laga wadaa) waa Ciidammada Wanaagsan ee ay haysanno ee heeganka ah ee isku dheeli-tiran.”
Wasiirka Maaliyaddu waxay sheegtay inay muddo soo haysay Xilalka kala duwan ee Qaranka, balse Xilligan ay u baahan tahay inay u bannayso dhallinyarada, dhallinyaraduna ay raacaan Dariiqa Waxqabadka “Wasaaraddan anigu waxaan u bannaynaynaa (Dadka kale), waan sheegay oo waxa laga yaabaa anigu (In aanan) dib (ugu noqon), Waayo? Marmar Caafimaad ahaan (Awgeed), Waayo? Tacab badan baa igu dhacay 7-dii Sannadood, markaa waxaan is leeyahay Dhallinyaradu Dariiqaa ha qaadaan. Waxaan u dedajinaynaa waxyaabahan (Taageerada Ciidammada) in Qofka dhallinyarada ah ee soo fadhiista meeshaydu in aanu daalin ee uu halkaa ka sii wado haddii Alle yidhaahdo.”ayay tidhi Wasiir Samsam Cabdi Aadan.
Taliyaha Ciidammada Qaranka Somaliland Sareeye Guuto Nuux Ismaaciil Taani ayaa isaguna Wasiirka Maaliyadda ku amaanay Taageerada ay la garab taagan tahay Ciidammada, isagoo xusay in tani aanay ahayn tii ugu horreysay “Wasiir Samsam Cabdi Aadan waxay nagu wareejisay Gaadiid TR ah oo kani ka mid yahay (Gaadhiga Warbaahinta loo soo bandhigay) iyo Qalab dhisme oo ay u baahan tahay Qaybta 31-aad ee Ciidammada Qaranku. Caawimadani maaha tii ugu horreysay ee Wasiir Samsam siiso Ciidammada Qaranka, Sannadkan gudihiisa Shan kun oo Buste ayay ku caawisay Ciidanka Jiidda hore, waxa kale oo ay nagu Caawisay raashin Qalalan. Wasiir Samsam Samo-fal badan ayay Waddanka ka geysataa, Ciidankana intaa iyo in ka badan-ba way u geysatay. Wasiir Samsam Cabdi Aadan waxaanu ugu mahadnaqaynaa hawlahaa Qaranka ee ay sida Hagar la’aanta ah u qabanayso.” ayuu yidhi, Taliyaha Ciidammada Qaranku.